Okuzenzakalelayo Sandblast Machine Factory - China okuzenzakalelayo Sandblast Machine Manufacturers, abahlinzeki
I-Sandblasting Cabinet Blasting Pot Nezingxenye ze-Sandblaster
Umshini wokuqhuma isihlabathi
Okuzenzakalelayo Sandblast umshini
IKhabethe leSandblast elomile
Umshini weSandblast ophathekayo
Uhlobo oluncane lweSandblaster
Umshini we-sandblast wamanzi
Umbhobho weSandblast / Iziphathi / iHose
Shot umshini ukuqhumisa
Vibratory wokucwebezelisa Machine
Inqubo Yokuqhuma Kwesihlabathi
Bench phezulu Sandblaster Cabin ...
Centrifugal Wemigqomo Finishin ...
Isandla siphethe iSandblasting Gun ...
2021 Uhlobo olusha okuzenzakalelayo dru ...
Elihambayo ibhande okuzenzakalelayo San ...
Izinsiza kusebenza ze-Sandblasting ze-Abrasive Cycle Sandblasting ze-Blasting Road / Bridge / Sheet
Ukuvuselela kabusha umshini we-sandblasting, osetshenziswa kakhulu ngensimbi engagqwali, imishini, imikhumbi, ujantshi, amapayipi kawoyela
ama-boilers nokwakhiwa kwamachweba nezinye izimboni zensimbi yokwakheka kokususa ukugqwala komhlaba, ukuqinisa ubuso;
Ingasetshenziselwa insimbi engagqwali engaphezulu yenkungu. Matte, nhle pickling passivation futhi ingilazi, itshe nokunye ukuqopha ebusweni, fafaza ukucutshungulwa zokuhlobisa.
Ukuphinda kusetshenziswe kabusha umshini we-sandblasting uhlukaniswe waba yingxenye ye-sandblasting nengxenye yokutakula, uma kuqhathaniswa nomshini wendabuko we-sandblasting,
isici sayo esikhulu ukuthi kungaba umshini wezinhloso eziningi. Lapho izidingo zokuvikelwa kwemvelo ziqinile,
ingasetshenziswa njengomshini osebenzisa kabusha i-sandblasting; Futhi azikho izidingo zokuvikelwa kwemvelo, futhi abasebenzi banezinyathelo zokuzivikela
kungaba sandblasting okuyingxenye wedwa njengoba umshini sandblasting evulekile, ngcono ukusebenza kahle, emva sandblasting
bese ingxenye yokutakula enolaka yesiza somsebenzi wokuhlanza isihlabathi, ukuvuselelwa kwe-abrasive ehlakazekile.
Phinda usebenzise ngokuzenzakalela imishini yokungcola kwesihlabathi mahhala
Vusa i-sandblaster yokutakula engenazintambo othomathikhi ifaka imbiza yokuqhuma edidiyelwe,
uhlelo lokutholwa komshini wemidiya, nokuqoqwa kothuli konke kuyunithi elilodwa le-compact
(Siqukethe ukuncela blast umshini nge elawulwa kude, kuqhuma hose, kuqhuma ikhanda inhlangano,
ukufuna kabusha nokuhlukanisa kanye nohlelo lokutakula olwenziwe ngomoya, umqoqi wothuli nenqola).
isetshenziselwa kabanzi ukwehla, ukuthungwa komhlaba, nokulungiswa kopende, okusetshenziselwa ukuhlanza ukugqwala okususa ensimini kawoyela
ukuvuselelwa kwesiqukathi, njll, kanye nohlelo lokutakula olwenziwe ngumoya lwenza ukuthi lusetshenziswe ngaphandle kwenkinga yokulahla uthuli nokulahla.
Izinhlelo zokuqhuma nokubuyisa zingasetshenziselwa ukuqhuma ngasikhathi sinye nokululama (ukuvalwa kokuqedwa kwesekethe) noma kungasetshenziselwa ukuqhuma komoya bese kuhlanzwa okulandelayo okwenzekile.
Ukuqhuma kanye nokululama ngasikhathi sinye kuqeda amafu othuli, ukungabonakali kahle nokuhlanzwa okubizayo.
Amandla wokuqhuma nokuzimela enza i-BRS ithuluzi elikhiqizayo nelisebenza ngezindlela eziningi elifanele izinhlelo eziningi ezahlukene.
I-Vacuum Blasting ilungele izinto ezinkulu ezifana nezikebhe zemikhumbi, amathangi amakhulu nezindawo zebhuloho zikakhonkolo.
Okuzenzakalelayo zilandelwa uhlobo isihlabathi blasting umshini
Okuzenzakalelayo zilandelwa isihlabathi blasting umshini
1..Ukulawula okuzenzakalelayo .isihlabathi sokuqhumisa okuzenzakalelayo nesihlabathi esiqhumayo njalo.imisebenzi yokuma ijog njll
Idizayini ye-3.Novel, nenhle, isakhiwo esilula, futhi kulula ukusebenza
Isigubhu sangaphambili. Kulula ukushintsha uthathe izingcezu zomsebenzi
5. Umshini utholwe ngesihlabathi ngendlela yokudlulisela / yebhakede, ungasebenzisa noma yisiphi isihlabathi (njenge-grit yensimbi, isibhamu sensimbi njll.
6 Nge efanayo umlomo wombhobho ubukhulu, ukusebenza kahle ingcindezi sandblasting umshini kuyinto 3-5times kuka ezivamile ukuncela isihlabathi ukuqhumisa umshini
IKhabethe le-sandblast elizenzakalelayo lezingxenye ezincane
izinto zesihlabathi ziqhuma ngejubane eliphakeme lokujikeleza okujikelezayo kumikhiqizo yepulasitiki ukususa i-burr, i-flake, ne-convex emgodini wemikhiqizo
amandla okuqhumisa alawulwa yisishintshi semvamisa kuphaneli yokulawula.
lo mshini unesihenqo sokushaqeka kanye nesistimu ejikelezayo yokujikeleza kwegazi, izinto zesihlabathi zingaphinde zenziwe kabusha.
izinto ezinhle ze-burr nesihlabathi zingaqoqwa zibe ngumqoqi wothuli, ezinkulu zingase zihlungwe ngesikrini.
Inama-anti-static motor kanye nombhobho, ukunciphisa ukubopha ne-powder adhesion nokwelula impilo yento.
igumbi lokuqhumisa lakhiwa nge-band conveyor, futhi limbozwe injoloba.
ingenziwa ngokwezifiso ngokuya kwesidingo somkhiqizo.
ukusetshenziswa kwempahla kuncike emikhiqizweni
Izinsiza ze-sandblaster ezenziwe ngokwezifiso ezisezingeni eliphakeme ngokwezifiso ze-HST-101
1. Le mishini ingakhiwa ngezibhamu eziyisifutho eziyi-7. Adjustable ama-degree angama-360 ukuqinisekisa ukuthi i-sandblasting elilinganayo ebusweni bomkhiqizo alikho i-angle efile
2. Isici esikhulu kunazo zonke zale mishini ukuthi i-turntable enkulu ijikeleza ngokuqhubekayo,
akukho ukuma ngezikhathi phakathi, futhi ukusebenza kahle kokuqhuma kuthuthukiswa kakhulu. Kungukukhetha kokuqala kokusebenza okujwayelekile naphakathi nendawo.
3. I-turntable enkulu ijikeleza ngokuqhubekayo, ukuguqulwa kwemvamisa okungenasinyathelo kuyashintshwa, futhi kulungiswa ngokuya ngezidingo zokukhishwa kwamakhasimende.
6 Ukuqhumisa izibhamu Okuzenzakalelayo Belt imishini sandblasting
Kukulungele ukucutshungulwa noma ukusakazwa kwezingxenye ezincane (i-aluminium zinc die casting, izingxenye zokwenza), ukususwa kokugqwala, ukwehla, i-bremsstrahlung, amamaki wamanzi, njll.
Isihlabathi esisebenzayo somshini wokukhwabanisa we-sandblasting:
I-Alumina, isihlabathi sensimbi segolide, ibhola lengilazi, isihlabathi se-walnut, isihlabathi se-resin, ibhola lensimbi elicolekileyo, isihlabathi sensimbi, ibhola lensimbi engagqwali, ibhola le-aluminium, njll.
I-piston air compressor
I-KB uchungechunge lwezingcindezi eziphezulu zomoya compressor isetshenziselwa ukukhiya komoya
ithuluzi lomoya, ithayi lokwehla kwamandla emali, inqubo yokushaya, upende wokufafaza
Ukuqhuma kwesihlabathi kanye ne-fluidic element.Uhlobo olunamandla lokuklama kwekhanda, sebenzisa izinto ezinhle ngokwanele.
Ukuqiniswa komklamo wezinto eziyinhloko, ubukhulu bezinto ezenziwe ngesandla
isisindo ngaphezu kwamanye amafektri, ukuphepha okuphezulu, nejubane eliphansi
ilungele ikakhulukazi umsebenzi osindayo, ukusebenza isikhathi eside okuqhubekayo
ukuthembeka okuphezulu kakhulu nempilo ende. Idizayini yokupholisa umoya ikakhulukazi kanye nomklamo wokugeleza komoya
okushisa okukhipha okuphansi.akulula ukuthunyelwa kwekhabhoni nokusebenza kahle okuphezulu.
Glass ukuqhumisa umshini
Izinto: 3.5mm uqweqwe lwensimbi olujiyile olubandayo
Ubukhulu: 1400mm * 1400mm * 1900mm
Ukusebenza usayizi gumbi: 1400mm * 1400mm * 800mm
Uthuli usayizi webhokisi leqoqo: 1300mm * 850mm * 2150mm
Uthuli lokususa uthuli: 3000W 380V 50HZ
I-turntable enkulu: 850 × 15mm ubukhulu, isivinini: 5 ukujika / iminithi
I-turntable enkulu eyenzelwe isivinini esinqunyiwe
I-turntable encane: u-100 × 10mm ubukhulu
Ijubane ngu: 0-40 / min
Elihambayo ibhande okuzenzakalelayo Sand ukuqhumisa Izinsiza kusebenza Pan plate sandblasting umshini
Inombolo yesibhamu: ama-8 ama-PC
Ububanzi be-conveyor: 1- 2m (Kungenzeka kube ngokwezifiso)
Uhlobo lomsebenzi: Okuzenzakalelayo
Lolu hlobo lokudlulisela umshini we-sandblasting othomathikhi ofanele i-limestone, imabula, i-granite, itshe lesihlabathi njll
Okuzenzakalelayo transmission sandblasting umshini
Ukuhlanzwa ngobuningi kwamatshe. Imabula, i-granite
Ngebhande lokudlulisa elizenzakalelayo
Ukuqhumisa Gun: Lolu chungechunge lwemishini lunamasethi ama-2-50 ama-spray guns.
Isibhamu ngasinye sokufafaza sinokulawula okuhlukile
Inganciphisa impahla yesihlabathi enamathiselwe ku-workpiece ngemuva kokucubungulwa.
Ingaklanywa ngokuya ngosayizi wokwenza umsebenzi wekhasimende nokuma komphumela.
Ingafakelwa futhi imishini yokuqoqa uthuli olumanzi ngokuya ngezidingo zomsebenzi wekhasimende.
Futha isibhamu kanye ne-gun rack, kungabekwa ngosayizi we-workpiece, futhi kungazungeziswa ama-degree angama-360, ukuze ahlukahlukene
okokusebenza kungenziwa sandblasted
2021 Uhlobo olusha oluzenzakalelayo uhlobo lwesigubhu semishini
Okuzenzakalelayo sandblasting umshini iza Roll futhi Turntable
Kungaba ukuqhuma okuzenzakalelayo noma ngesandla. izingxenye ezifanelekayo ezifana nezikulufo njll nazo zilungele ukuqhumisa izingxenye ezisindayo njengezikhunta
1.Ingaqhuma ngokuzenzakalela isihlabathi ngaleso sikhathi bese ijogisa umsebenzi wokumisa;
2. Umsebenzi ulula ukulayisha futhi wehlise, kulula ukusebenza, futhi kusindisa imithombo yabantu;
3. Usayizi roller kanye isibhamu kungenziwa yakhelwe ngokuvumelana nemfuneko yekhasimende;
4. Kufanele ukukhiqizwa ngobuningi kwezingcezu zomsebenzi ezincane, njengamakhanda e-zipper, ama-screwdriver bits, ama-drill bits, njll.
5. Isisindo Sokulayisha IDrum: 15-20kg
I-roller ingashintshwa ngokuzenzakalela, ngokuya ngejubane lokujikeleza elihlukile lomsebenzi,
futhi ihlanganiswe nesikhumba se-silicone ukuvimbela ukushayisana nomsebenzi wokulimala, i-roller nayo ingenziwa ngezifiso ngokobukhulu bento nomsebenzi nembobo;
Ngokuqhumisa okuzenzakalelayo, ukushaya okuzenzakalelayo, isexwayisi sesikhombisi sesikhathi, ukumisa neminye imisebenzi;
Hlakulela uhlaka lwesibhamu oluzenzakalelayo, isibhamu sokufafaza singakhetha izibhamu ezi-1-4,
isibhamu sokufafaza sinokulawula okuhlukile, futhi inemisebenzi emibili yezandla nezenzekelayo;
Uhlobo lokuhlukaniswa kwesiphepho, ukuvuselelwa okuzenzakalelayo nokuvuselelwa kwezinto zokwakha isihlabathi,
ukuhlukaniswa okuzenzakalelayo kwesihlabathi nothuli ukunciphisa ukusetshenziswa kwezinto zesihlabathi, kulula ukulawula ukusebenzisa usayizi wenhlamvu yesihlabathi
Umshini unezindlela ezimbili ezisebenzayo: ezenziwa ngezandla nezizenzekelayo
Lolu chungechunge lwamamodeli lungenziwa ngezifiso ngezibhamu eziyi-3-4 zamamodeli angajwayelekile;
Ama-abrasives asebenzayo: i-brown corundum, i-corundum, ubuhlalu beglasi, njll .; uma icindezelwe, kungasetshenziswa ama-abrasives wensimbi afana ne-steel grit nephilisi lensimbi.
Ukusetshenziswa: Kufanele ukuqhutshwa kwe-batch kwenani elikhulu lezingcezu zomsebenzi ezincane. Isibonelo: Imikhiqizo ye-Bake-lite,
isikulufa amantongomane, ama-drill bits, ompompi bocingo, amakhanda we-batch, amakhanda oziphu, izesekeli zefoni ephathekayo, i-acrylic, imikhiqizo yepulasitiki, ithusi, i-aluminium neminye imikhiqizo.